Online Learning Amid Covid-19 Outbreak | Si Thu Diary 02 – China Report ASEAN
April 27, 2020 China Report ASEAN China-ASEAN, Hottest Leaveacomment
I’ve recently participated inalive talk organized by Mizzima news, one of the well-known media outlets in Myanmar. We discussed the current situation briefly due to the shortage of time (although I had so many things to discuss adequately).
During the discussion, I focused on online learning amid the outbreak, since schools and universities are all closed to curb the spread of the coronavirus.
I shared the experience of my Myanmar friends who are currently studying in China. It was mostly regarding how online learning is used effectively in China, providingadigital platform for both teachers and students.
According to schools and universities, there are different types of online learning. Second semester has already started online in all Chinese universities. I’ve also heard that even kindergarteners are now being taught online.
Online teaching in China is notanew thing. Years ago, China started some online teaching programs for students living in remote areas where there is lack of teachers.
It is said that teachers get intensive training before they start to teach students online.
To make the best of your quarantine time, you can start using your online time effectively and learnanew skill. Many of my friends are now studying new things such as gardening, making traditional snacks, and cooking. Some of them watch movies, read books and learnanew language.
I would like to kindly advise all of my friends to save the world by staying home as much as possible. Stay healthy, eat healthily, exercise regularly. One last thing, think about this time asaperfect opportunity for you to learnanew thing that’ve you never thought about learning before.
လောလောဆယ် ရန်ကုန်ကိုရောက်နေတုန်း မဇ္ဈိမရဲ့ live talk တစ်ခုမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက များတော့ အနှစ်ချုပ်ပြီးပဲ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ လက်ရှိ COVID ကာလမှာ ကျောင်းတွေပိတ်ထားတုန်း online ကနေ စာဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာပါပဲ။
ကျနော်ကတော့ တရုတ်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ မြန်မာသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအကြောင်း ပြန်ပြီး မျှဝေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အွန်လိုင်းကနေ စာသင်ကြားရေးကို ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးနေလဲဆိုတာကို ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အွန်လိုင်းကနေသင်ကြားတဲ့ပုံစံတွေလည်း ကွဲလွဲမှုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တူတာတစ်ခုကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အခုဆိုရင် တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ဝက်အတန်းတွေကို အွန်လိုင်းကနေ စပြီး သင်ပေးနေပါပြီ။ မူကြိုကလေးတွေကိုတောင် အွန်လိုင်းကနေသင်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရုတ်မှာ အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးစနစ်က အခုမှစတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဝေးလံခေါင်ဖျားပြီး ဆရာအင်အားမလုံလောက်တဲ့ကျောင်းတွေမှာ အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် သင်ပေးနေတာ ကြာပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံက တချို့သောကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်း အခုကာလမှာ ကျောင်းသားတွေကို အွန်လိုင်းကနေ စာမသင်ပေးခင် ဆရာတွေကို အရင်ဆုံး လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးတာမျိုးတွေလည်း လုပ်ပေးသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်နေတုန်းမှာ အဆိုးထဲက အမြတ်ထုတ်ဖို့ကတော့ အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ အွန်လိုင်းကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး အသစ်အသစ်သော ပညာရပ်တွေကို လေ့လာဖို့ပါပဲ။ ကျနော့်အသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဆိုရင်လည်း တချို့က အပင်စိုက်တာလေးတွေ လေ့လာပြီး လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြတယ်၊ တချို့ကလည်း မုန့်လုပ်နည်း၊ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ လေ့လာပြီး လုပ်စားကြည့်နေကြတယ်။ တချို့ကလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြည့်တာ၊ စာအုပ်တွေဖတ်တာ၊ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုခုကို လေ့လာတာမျိုးတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ရင်းနှီးစွာအကြံပြုချင်တာကတော့ အခုကာလမှာ တတ်နိုင်သလောက် အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ကြဖို့ပါပဲ။ အိမ်မှာနေရင်း ကျန်းမာအောင်နေပါ၊ ကျန်းမာအောင်စားပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်လေ့လာဖို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုကို အခုအချိန်မှာ စပြီး လေ့လာဖို့ အချိန်ကောင်းပဲဆိုတာ ပြောရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါရစေခင်ဗျား။
Previous Post: Fighting Covid-19 Together | Si Thu Diary 01
Next Post: Waiting for School to reopen | Si Thu Diary 03